Dadka waawayn ay Home: Market for "Old People's Home"
Market for "Old Dadka Home"
MOWDUUCYADA:Market for Old People’s HomeDadka waawayn ay Home
Posted By: May Anokuru Laga yaabaa 29, 2012
Su'aal: Aniga iyo qoyskayga waannu ku nool Maraykanka, oo waxaan mar walba taliska la dhacdooyinka ee Nigeria. Qayb ka mid ah waxa uu ahaa iyada oo kulan la qaabkaaga xalinta dhibaatooyinka marketing, socda ay hortiinna online (on www.iroy.in). Fadlan ii soo sheeg adiga oo u taagan xaaladda this:
Xaaskeyga (waase caafimaadka diiwaangashan uu aad u soo martay) ayaa dhawaan looga baahan yahay urur caafimaad oo caalami ah si ay u fududeeyaan sameynta, ee Nigeria, guri la degan yahay daryeelka dadka waayeelka ah (si fiican u yaqaan in dalka sida Old Dadka Home). Haddii guul, tan faafin lahaa in qaar ka mid ah meelaha kale ee dalka. Waa maxay shuruudaha suuqa ku haboon sida meel ku? - Taiwo O.
My in xaaladda noocan oo kale ah ku taagan caadi ahaan, waxaa ka codsanayaa in aad amar ka jimicsi Suuq Sirdoonka dhamaystiran u bilaabatay, si aad awoodi sawir sax ah oo ah suuqa ugu qaadashada go'aan wax ku ool ah, sida aan aqbalin ha "qiyaaso si qoto dheer ee webi labada cagood". In kasta oo ay taasi, Anigu waxaan ahay dhiiran tahay in ay dhiiri dadaalkaaga by bixinta nooc ka mid ah guudmar ku saabsan waxa laga filan karo ee degaanka, ay weheliyaan intension ah oo akhristayaasha kale ay u soo dheegato faa'iidooyinka qaar ka mid ah ka-socodkiisa oo ku saabsan halkan.
Daryeelka guriga Residential dadka waayeelka ah, inta badan loo gudbiyaa ee Nigeria sida Old Dadka Home (OPH), muujinayaa degaan oo kooxda ah in ay u baahan daryeel ama kormeer gaar ah, kiiskan dadka waayeelka ah in inta badan dhici gudahood kala duwan oo da 'ah 75 sano iyo wixii ka sarreeya. OPHs (oo waxaan weli u arkaan sida ganacsi oo guriga xanaanada) waxaa inta badan loogu talo galay inay cunto siiyaan, hoy, iyo daryeel caafimaad oo dadka deggan ay, iyo sidoo kale bulshada, diinta, madaniga ah, hal abuur leh, iyo hawlaha caqliga.
In Nigeria, hannaankii guud waxaa loogu talagalay dadka waayeelka ah in ay isugu (hal sabab ama mid kale) mararka qaarkood xarumaha sida, sida lagu soo abaabulay waxaa laga yaabaa in ururada aan dawliga ahayn ama kuwa sadaqaystee. Fikradda aasaaska xarunta cad-jaray la deggan yahay (sida heli gudaha wadamada horumaray) ma aha wax caadi ah agagaarka. Haddii aan khatar jimicsi Suuq Sirdoonka aan soo jeediyay, Waxaan ha ka cabsan in halkaan lagu xusey in ay tahay 'qiimihiisu isku dayaya' in aragtida saameyn cad ee loo naaxiyo, iyo rabitaanka bulshada kale ee casriga ah bulshada Nigeria uu wajahayaa hadda.
By habka caqabadaha, Waxaan ka shakisan tahay in aad hore u yihiin war ku saabsan meesha nidaamka qaraabada goob Nigeria dhaqanka. Qaar badan oo ay u badan tahay in ay ilaaliyaan aragtida ah in nidaamkan mar walba tiraan doonaa kuwa ay dadka waayeelka ah ee qoyska, halkii ay 'la takooro "iyaga xarunta. Aadida ay jeediya bulshada casriga ah, oo ay weheliso hoos u dhac soonkii nidaamka qoyska la dheereeyey, Nigeria oo aan la dahaaran karaa in habkani, sida shaki kuma jiro in ay tahay arrin ayaana meel dhigay goobaha ku filan si ay u qabtaan baahiyaha dadka waayeelka ah. Waxay u baahan yihiin oo kaliya dadka ku haboon in loo xaqiijiyo kartaa raaxada iyo sidoo kale fayo-qabka dadka degan meelaha sida.
Intaas waxaa sii dheer, caqabadaha si fiican u yaqaan in samaynta waxqabad ee Nigeria (iyo qaybaha kharashka dheeraad ah) Waa in la dhasha maskaxda - kaabayaasha Poor (iyadoo aan ku fillayn bixinta ee korontada ayaa fure, halka gobolka liita oo ka mid ah wadooyinka iyo adeegyada kale waxaa taaj ilaa); ka dibna kor ku xusan oo dhan, musuqmaasuqa, taas oo uu diiday inuu tago. Canshuuraha Multiple oo badan waxa ay ka cabanayeen oo ku saabsan, waxaa laga yaabaa in ay u badan tahay ma khuseyso haddii ay taasi ku, in aragtida noocan dadaali badan tahay in lagu arko bani'aadamnimo. Laga soo bilaabo ganacsiga muuqaal ah, Anigu waxaan ahay arrin warhayo in ay jiraan 'ganacsiga caafimaadka' had iyo jeer waa mashruuc aad u qaali ah.
Si kastaba ha ahaatee, oo og, kuwaas oo meelaha sida cad ee hagardaamooyin, iyo dalkii hantida u ahaa waxa ay qaadanayso in iyaga surmount 'jidka Nigeria' ah, ku saabsan 50 boqolkiiba shaqo loo sameeyo. Tani waa aan iska indha tallaabooyin ay si ku habboon diiwaan OPH la maamulka la xiriira, oo waxaan aaminsanahay in aad ogtahay waa waajib sida ee dalka Mareykanka.
Haddii aan la socday galay noocyada la filayaa inuu ku haboon sida kala duwan ee adeegyada degaanka, Anigu waxaan ahay arrin ogyihiin xaqiiqda in dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay ku fududeynayaan waxa ay qaadato si aad dhab ah ee Nigeria OPH, waa in ay ogaadaan waxa lagu rakibay waa jidkii muuqaalada ee OPH ah (e.g. la dejiyey, qolalka gaarka ah, Xafiisyada, meelaha madadaalada, soo dhoweynta, iwm). Waxaa la mid ah ka haya shaqaalaha ku filan ee daryeelayaasha u qalma sida kalkaaliyayaasha diiwaangashan (RN), takhasus cunto(s), shaqaalaha adeegyada bulshada, iyo xataa shaqaalaha nadaafada sida janitors.
Waxaa la taxaya in noqon doono lagama maarmaanka ah sida waxyaabaha in Yeelo dadka deegaanka aad joogto si raaxo leh sida guryahooda: Goobaha dhaqid; adeeg wanaagsan oo linenka guri; adeegyada shaqo guri wareegsan (si ay u caawiyaan dadka deegaanka in aan sii wadi karaan qolalka ahaantood); hawo ama nidaamka qaboojiyaha; oo kor ku xusan oo dhan nidaamka jirta xaalad degdeg ah jawaab. Wixii oo doonaya in qoysaska dalka Nigeria, Kanu waa warka culus ee daryeelka xubnaha qoyskooda ka weyn wuxuu noqon karaa mid xad-dhaaf ah, iyo meel waayeelka, kuwaas oo bulsho karo iyo ka qayb qaataan hawlaha meel ammaan ah, deegaanka kormeero u noqon laheyd doorasho soo dhaweyn.
By habka tilmaamo degaanka ee dhiirrigelinta, Waxaan si fudud u tilmaami kartaa in xitaa halka ay dadka intooda badan ku raacsan waxaana suura gal ah in adeegyada degaanka waxaa inta badan la xidhiidha bani'aadamnimada, qalabka of marketing waa kuwo khuseeya arrintan la xiriira. Suuq OPH ah waxay u baahan tahay khibrad ma aha oo kaliya in qiimeynta saxda ah ee tartanka deegaanka, laakiin sidoo kale in miisaaminta gudaha ee xarunta. Sidoo kale fahmo waxa ay macmiil ka iman kara waxay u baahan tahay iyo sida xarunta uu fuliyo baahiyahaas, waxay bixisaa qalab muhiim ah suuq OPH la saadaaliyey.
Sida xarunta, Marka laga eego dhinaca filayo xirfadeed, lahaa u badan tahay in la xidhan-in la isbitaal maxalli ah, an suuq qayb muhiim ah oo looga faa'iideeysan karaa waa in ka kooban yahay kuwa ugu horayn beegsan macaamiishooda goobaha isbitaalkaan ayaa gudahood (e.g. xaafadaha gaarka ah dad badan oo macaamiisheeda ay ka yimaadeen, asalkooda dhaqaale, oo markaas qalabka kor loo xisaabinayaa waa inaad rafcaan u Dadka daggan afartan xaafadood, oo magaalooyinka la xiriira). Fadlan si xor ah u wac si aad u qalab dheeraad ah oo saameyn ku dhex suuq ama ku haboon xeelado, haddii aad u baahan tahay sida.
1 Comment on "Market for "Old Dadka Home""
Lily | March 3, 2013 at 1:38 waxaan ahay | Reply
Tani waa guriga daryeelka dadka laga cabsado. Waxaan doonayaa in ay doortaan daryeelka guriga halkaas oo aan kari karin nabad iyo waan ogahay in aan jacayl la si fiican loola dhaqmo. Waad ku mahadsan tahay this post cabsi badan oo wax tar leh.